बिहेको निम्तो कार्डभित्र रक्सीको बोतल, साथमा सितन र मिनरल वाटर ! भिडियो भाइरल – ABC NEWS 24
बिहेको निम्तो दिने क्रममा निम्तो कार्डभित्र रक्सीको बोतल, सितन र मिनरल वाटरको बोतलसमेत राखेर पठाइएपछि यो घटनाले सामाजिक संजालमा चर्चा पाएको छ । निमन्त्रणा कार्ड खोल्दै गर्दाको भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार यो कार्ड भारतको महाराष्ट्रमा पठाइएको हो ।
महाराष्ट्रको चन्द्रपुरमा पठाइएको यो कार्डको सबैभन्दा माथि भगवान गणेशको फोटो छापिएको छ । त्योभन्दा तलको पानाका वैवाहिक कार्यक्रमको विवरण छापिएको छ । त्यो पानाभन्दा तलको दृश्य भने निकै रोचक छ । सबैभन्दा तल रक्सीको बोतल र सितन साथमा मिनरल वाटरको बोतल पनि छ । सबैभन्दा रोचक त के भने यो घटना त्यो जिल्लामा भएको हो जहाँ मदिरा प्रतिबन्धित छ ।
यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यहाँ मदिरामा प्रतिबन्ध लगाइएको बारे प्रश्न उठेका छन् । कार्ड छाप्ने व्यक्तिले भने एक भारतीय मिडियासँग कुरा गर्दै बोतल भएका कार्ड चन्द्रपुर जिल्लामा नबाँडिएको दावी गरेका छन् । उनले चन्द्रपुरमा मदिरा प्रतिबन्धित भएकोले मदिरा भएको कार्ड नबाँडिएको बरु चन्द्रपुरमा बाँडिएका कार्डमा फलफूल राखिएको बताए । यस्ता मदिरा राखिएका कार्ड अन्य जिल्लामा बाँडिएको उनले बताए
← भारतसँगको सीमानामा थप तीन ठाउँमा सीमा निगरानी चौकी स्थापना हुँदै
Breaking News !! ओलीद्वारा संसद् विघटनको सिफारिस →